GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Jenesis Ọpụpụ Levitikọs Ọnụ Ọgụgụ Diuterọnọmi Joshụa Ndị Ikpe Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ndị Eze 2 Ndị Eze 1 Ihe E Mere 2 Ihe E Mere Ezra Nehemaya Esta Job Abụ Ọma Ilu Ekliziastis Abụ Solomọn Aịzaya Jeremaya Abụ Ákwá Ezikiel Daniel Hosia Joel Emọs Obedaya Jona Maịka Nehọm Habakọk Zefanaya Hagaị Zekaraya Malakaị Matiu Mak Luk Jọn Ọrụ Ndịozi Ndị Rom 1 Ndị Kọrịnt 2 Ndị Kọrịnt Ndị Galeshia Ndị Efesọs Ndị Filipaị Ndị Kọlọsi 1 Ndị Tesalonaịka 2 Ndị Tesalonaịka 1 Timoti 2 Timoti Taịtọs Faịlimọn Ndị Hibru Jems 1 Pita 2 Pita 1 Jọn 2 Jọn 3 Jọn Jud Mkpughe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ụbọchị ndị dị nsọ na ememme dị iche iche (1-44)
Ụbọchị Izu Ike (3)
Ememme Ngabiga (4, 5)
Ememme Achịcha Na-ekoghị Eko (6-8)
Otú e si eji mkpụrụ mbụ enye onyinye (9-14)
Ememme Izu (15-21)
Iwe ihe ubi otú kwesịrị ekwesị (22)
Ememme e ji ịfụ opi echeta na a ga-eme (23-25)
Ụbọchị Ikpuchi Mmehie (26-32)
Ememme Ụlọ Ndò (33-43)
23 Jehova gwakwara Mosis, sị: 2 “Gwa ndị Izrel okwu, sị ha, ‘Ememme ndị a ga na-emere Jehova n’oge dị iche iche,+ bụ́ ndị unu ga-ama ọkwa ka e mee,+ bụcha mgbakọ dị nsọ. Ha bụ ememme ndị a ga na-emere m n’oge dị iche iche: 3 “‘Unu nwere ike ịrụ ọrụ ụbọchị isii, ma ụbọchị nke asaa bụ ụbọchị izu ike nke a ga-ezu naanị ike na ya.+ Ọ bụ ụbọchị mgbakọ dị nsọ. Unu agaghị arụ ụdị ọrụ ọ bụla. Ọ bụ ụbọchị izu ike unu ga-edebere Jehova n’ebe ọ bụla unu bi.+ 4 “‘Ihe ndị a bụ ememme ndị a ga na-emere Jehova n’oge dị iche iche, ya bụ, mgbakọ dị nsọ ndị unu ga-ama ọkwa ka e mee n’oge e ji eme ha: 5 N’abalị iri na anọ n’ọnwa mbụ,+ unu ga-emere Jehova Ememme Ngabiga ná mgbede.*+ 6 “‘Ọ bụ n’abalị iri na ise n’ọnwa a ka Ememme Achịcha Na-ekoghị Eko unu ga-emere Jehova ga-amalite.+ Unu ga-eri achịcha na-ekoghị eko ụbọchị asaa.+ 7 N’ụbọchị nke mbụ, unu ga-enwe mgbakọ dị nsọ.+ Unu agaghị arụ ọrụ ọ bụla siri ike. 8 Ma unu ga-achụrụ Jehova àjà a na-esu ọkụ ruo ụbọchị asaa. Unu ga-enwe mgbakọ dị nsọ n’ụbọchị nke asaa. Unu agaghị arụ ọrụ ọ bụla siri ike.’” 9 Jehova gwakwara Mosis, sị: 10 “Gwa ndị Izrel okwu, sị ha, ‘Mgbe unu ga-emecha bata n’ala m ga-enye unu ma wee ihe ubi ya, unu ga-ebutere onye nchụàjà otu ùkwù ọka bali si ná mkpụrụ mbụ unu+ wetara n’ubi unu.+ 11 Onye nchụàjà ga-efegharị ùkwù ọka bali ahụ n’ihu Jehova ka o wee nabata unu. Ọ bụ n’ụbọchị na-esote Ụbọchị Izu Ike ka ọ ga-efegharị ya. 12 N’ụbọchị e fegharịrị ùkwù ọka bali ahụ, unu ga-achụ ebule ahụ́ dị mma, nke na-agafebeghị otu afọ, n’àjà. Ọ bụ àjà a na-esu ọkụ a na-achụrụ Jehova. 13 A ga-eji ụzọ abụọ n’ụzọ iri nke otu efa* ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, chụọ àjà ọka ya. Ọ bụ àjà na-esi ísì ọma* a na-esuru Jehova ọkụ. A ga-eji otu ụzọ n’ụzọ anọ nke otu hin* mmanya chụọ àjà mmanya ya. 14 Unu erila achịcha ọ bụla ma ọ bụ ọka bali e ghere eghe* ma ọ bụ ọka bali ọhụrụ ruo n’ụbọchị a, ruo mgbe unu wetaara Chineke unu onyinye. Ọ bụ iwu ga-adịgide adịgide nke ọgbọ unu niile ga na-edebe n’ebe ọ bụla unu bi. 15 “‘Malite n’ụbọchị na-esote Ụbọchị Izu Ike ahụ, ya bụ, malite n’ụbọchị unu wetara ùkwù ọka bali a ga-eji chụọ àjà a na-efegharị efegharị, unu ga-agụ ụbọchị izu ike asaa.+ Ụbọchị izu ike ndị ahụ ga-ezu ezu. 16 Unu ga-agụ ụbọchị iri ise+ gụruo n’ụbọchị na-esote Ụbọchị Izu Ike nke asaa, unu ewetaziere Jehova àjà ọka ọhụrụ.+ 17 Unu ga-esi n’ebe unu bi weta ogbe achịcha abụọ ka ọ bụrụ àjà a na-efegharị efegharị. A ga-eji ụzọ abụọ n’ụzọ iri nke otu efa* ntụ ọka e gwere nke ọma mee ha. A ga-etinye ha ihe na-eko achịcha,+ ka ha bụrụ mkpụrụ mbụ kara aka a na-enye Jehova.+ 18 Ihe ndị unu ga-eweta ha na ogbe achịcha ndị ahụ bụ ebule asaa ahụ́ dị mma, ndị gbara otu afọ otu afọ, nakwa otu ehi na ebule abụọ.+ Ha ga-abụ àjà a na-esu ọkụ a na-achụrụ Jehova, ha na àjà ọka ha na àjà mmanya ha. Ọ bụ àjà na-esi ísì ọma* a na-esuru Jehova ọkụ. 19 Unu ga-ejikwa nwa ewu chụọ àjà mmehie,+ jirikwa ụmụ ebule abụọ gbara otu afọ otu afọ chụọ àjà udo.+ 20 Onye nchụàjà ga-efegharị ebule abụọ ahụ, ha na ogbe achịcha ndị ahụ e ji ọka wit mbụ kara aka mee, ka ha bụrụ àjà a na-efegharị efegharị n’ihu Jehova. Ha ga-abụrụ Jehova ihe dị nsọ nke ga-abụ nke onye nchụàjà.+ 21 N’ụbọchị ahụ, unu ga-ama ọkwa+ ka unu nwee mgbakọ dị nsọ. Unu agaghị arụ ọrụ ọ bụla siri ike. Ọ bụ iwu ga-adịgide adịgide nke ọgbọ unu niile ga na-edebe n’ebe ọ bụla unu bi. 22 “‘Mgbe unu na-ewe ihe ubi n’ala unu, unu ewerechala ihe niile dị n’ọnụ ọnụ ubi unu. Unu atụtụkwala ihe fọrọ n’ihe ubi unu.+ Unu ga-ahapụ ha maka ndị ogbenye+ na ndị mbịarambịa.+ Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu.’” 23 Jehova gwakwara Mosis, sị: 24 “Gwa ndị Izrel, sị, ‘N’abalị mbụ n’ọnwa nke asaa, unu ga-ezu naanị ike. A ga-afụ opi+ n’ụbọchị ahụ ka e chetara unu na a ga-enwe mgbakọ dị nsọ. 25 Unu agaghị arụ ọrụ ọ bụla siri ike. Unu ga-achụkwara Jehova àjà a na-esu ọkụ.’” 26 Jehova gwakwuru Mosis, sị: 27 “Ma, ụbọchị nke iri n’ọnwa nke asaa ahụ ga-abụ Ụbọchị Ikpuchi Mmehie.+ Unu ga-enwe mgbakọ dị nsọ. Unu ga-emekpa onwe* unu ahụ́,*+ chụọkwara Jehova àjà a na-esu ọkụ. 28 Unu arụla ụdị ọrụ ọ bụla n’ụbọchị a n’ihi na ọ bụ ụbọchị ikpuchi mmehie nke a ga-eji na-ekpuchiri unu mmehie+ unu n’ihu Jehova bụ́ Chineke unu. 29 Onye* ọ bụla na-emekpaghị onwe ya ahụ́* n’ụbọchị ahụ, a ga-egbu ya.*+ 30 M ga-ebibi onye* ọ bụla rụrụ ụdị ọrụ ọ bụla n’ụbọchị ahụ. 31 Unu arụla ụdị ọrụ ọ bụla. Ọ bụ iwu ga-adịgide adịgide nke ọgbọ unu niile ga na-edebe n’ebe ọ bụla unu bi. 32 Ọ bụ ụbọchị izu ike nke unu ga-ezu naanị ike na ya. Unu ga-emekpakwa onwe* unu ahụ́+ ná mgbede ụbọchị nke itoolu n’ọnwa ahụ. Unu ga-edebe ụbọchị izu ike unu malite ná mgbede ruo ná mgbede.” 33 Jehova gwakwara Mosis, sị: 34 “Gwa ndị Izrel, sị, ‘N’abalị iri na ise n’ọnwa asaa ahụ, unu ga-amalite Ememme Ụlọ Ndò a na-emere Jehova. Unu ga-eme ya ruo ụbọchị asaa.+ 35 Unu ga-enwe mgbakọ dị nsọ n’ụbọchị nke mbụ. Unu agaghịkwa arụ ọrụ ọ bụla siri ike. 36 Unu ga-achụrụ Jehova àjà a na-esu ọkụ ruo ụbọchị asaa. N’ụbọchị nke asatọ, unu ga-enwe mgbakọ dị nsọ.+ Unu ga-achụkwara Jehova àjà a na-esu ọkụ. Ọ bụ nzukọ pụrụ iche. Unu agaghị arụ ọrụ ọ bụla siri ike. 37 “‘Ihe ndị a bụ ememme+ ndị a ga na-emere Jehova, ndị unu ga-ama ọkwa ka e mee ka ha bụrụ mgbakọ dị nsọ.+ Ha ga-abụ oge a ga na-achụrụ Jehova àjà a na-esuru ya ọkụ, ya bụ, àjà a na-esu ọkụ+ na àjà ọka+ na àjà mmanya.+ A ga na-achụ àjà ndị a otú e kwuru ka a na-achụ ha n’ụbọchị nke ọ bụla. 38 Unu ga na-achụ àjà ndị a, na-achụkwa ndị nke a na-achụ n’ụbọchị izu ike niile nke Jehova,+ ha na onyinye ndị unu wetara,+ onyinye ndị unu kwere ná nkwa,+ nakwa onyinye ndị si unu n’obi,+ bụ́ ndị unu ga-enye Jehova. 39 Ma n’abalị iri na ise n’ọnwa nke asaa, mgbe unu chịkọtachara ihe ala unu mepụtara, unu ga-eme ememme Jehova ruo ụbọchị asaa.+ Unu ga-ezu naanị ike n’ụbọchị nke mbụ. Unu ga-ezukwa naanị ike n’ụbọchị nke asatọ.+ 40 N’ụbọchị nke mbụ, unu ga-ewere mkpụrụ nke osisi ndị mara mma, igu nkwụ,+ alaka osisi ndị nwere akwụkwọ na alaka osisi pọpla ndị dị na ndagwurugwu. Unu ga-aṅụrịkwa ọṅụ+ n’ihu Jehova bụ́ Chineke unu ruo ụbọchị asaa.+ 41 Unu ga-eme ya ụbọchị asaa n’afọ ka ọ bụrụ ememme a na-emere Jehova.+ Ọ bụ iwu ga-adịgide adịgide nke ọgbọ unu niile ga na-edebe. Unu ga na-eme ya n’ọnwa nke asaa. 42 Unu ga-ebi n’ụlọ ndò ụbọchị asaa.+ Ndị niile bụ́ ụmụ afọ Izrel ga-ebi n’ụlọ ndò, 43 ka ọgbọ unu ndị ga-esote unu wee mara+ na ọ bụ n’ụlọ ndò ka m mere ka ndị Izrel biri mgbe m na-akpọpụta ha n’Ijipt.+ Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu.’” 44 Mosis wee gwa ndị Izrel banyere ememme ndị a ga na-emere Jehova n’oge dị iche iche.
^ O nwere ike ịbụ, “na-ebughị ọnụ.”